Sony Xperia XZ2 Premium နှစ်ဆကင်မရာသည်ဂျပန်ဖုန်းများသို့ရောက်ရှိသည် Gadget သတင်း
စမတ်ဖုန်းကဏ္inတွင်လုပ်ကိုင်နေသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးသည်သူတို့၏ပစ္စည်းကိရိယာအားလုံးကိုတူညီသောလက္ခဏာများကိုသာအာရုံစူးစိုက်သည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများသည်လူကြိုက်များသော“ ထစ်” ကိုအခြားသူများထက် ပို၍ အောင်မြင်မှုရှိသည့်အချို့ကိုထည့်ရန်ပင်လောင်းကြသည်။ နောက်ပြီးကင်မရာနှစ်လုံးကို - အချို့ကိစ္စများတွင်သုံးဆ - ကျောဘက်တွင်မလွဲနိုင်ပါ။ ဆိုနီသည်ဤအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူဈေးကွက်တွင်မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမှမထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည့်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ယနေ့ပထမ ဦး ဆုံး စမတ်ဖုန်း နှစ်ဆနောက်ဘက်အာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူ: Sony Xperia XZ2 ပရီမီယံ.
ဒါပေမယ့်သတိထားပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့မှာ dual sensor ပါ ၀ င်သော mobile ထပ်မံတပ်ဆင်ထားရုံသာမကစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်စေသည်။ ကြီးမားသည် မြင့်မားသော resolution display ကို; အားလုံးမှခံနိုင်ရည်ကိုယ်ထည်; ကောင်းသောဘက်ထရီစွမ်းရည်နှင့် RAM ပမာဏအများကြီး။ ၎င်းသည် Sony ၏နောက်ဆုံးပေါ်တင်ဆက်မှု၏သော့အချို့ဖြစ်သည်။
1 4K display သည်များစွာသော frames များကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ထားသော်လည်း
2 Qualcomm မှနောက်ဆုံးပေါ်လောင်းကစားအတွင်း၌စွမ်းအင်ကုန်ကြမ်း
3 ကောင်းမွန်သော resolution ဖြင့်ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်ရှေ့ကင်မရာ
4 ရေခံနိုင်သည့်စွမ်းရည်မြင့်ဘက်ထရီနှင့်နောက်ဆုံးပေါ် Android
4K display သည်များစွာသော frames များကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ထားသော်လည်း
ဆိုနီသည်ကိုယ်ပိုင်အမာခံရှိခြင်းနှင့်ပြိုင်ပွဲ၏အခြားအသင်းများကိုသတိပေးသည့်ဒီဇိုင်းများကိုမေ့သွားခြင်းအပေါ် ဆက်၍ လောင်းလိုပုံရသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဟာကတခြားအမှတ်တံဆိပ်တွေထက်ပိုပြီးရိုးရာဒီဇိုင်းကိုဆက်ပြီးတွေ့မြင်စေလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့တွင်ဘောင်များစွာပါသောဒီဇိုင်းရှိလိမ့်မည်။ သတိထားပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြီးဆုံးခြင်းကိုမကြိုက်ဟုမဆိုလိုပါ။ မျဉ်းကြောင်းအတော်လေးချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ကြပြီးထောင့် rounded နေကြသည်.
ဒါတောင်မှ Sony Xperia XZ2 Premium ကိုအသုံးပြုသည် ၅.၈ လက်မထောင့်ဖြတ်မျက်နှာပြင် 5,8K resolution ရှိသည်ပြည်သူလူထု၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိုသည့်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အသုံးပြုသူသည်ဤမိုဘိုင်းဖုန်းကိုအရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည် chrome အနက်ရောင်သို့မဟုတ် chrome မီးခိုးရောင်။
အကယ်၍ သင်ဟာကဏ္ in အတွင်းရှိနောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းများနှင့်သင့်ကိုတိုင်းတာနိုင်လျှင်သင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည် ဟာ့ဒ်ဝဲ ယခုအချိန်တွင် ပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုနီဟာကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ် ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ထူးခြားတာကသူ့ရဲ့ပရိုဆက်ဆာပါပဲ Qualcomm Snapdragon 845သင့်အားစကားပြောခွင့်ပြုမည့်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးသားရဲ၊ ယခုအချိန်တွင်အခြားဆိပ်ကမ်းများသို့သင်ပြောခွင့်ပြုမည်။
ဒီချစ်ပ်ထဲကိုထည့်ရမယ် 6GB RAMသိုလှောင်နိုင်သည့်ပမာဏ 64 GB အထိသိုလှောင်နိုင်စွမ်း - သိုလှောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်လျော့နည်းမှုရှိသော drives များကို Sony ကလျစ်လျူရှုထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် MicroSD မှတ်ဉာဏ်ကဒ်များကို ၄၀၀ GB အထိအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒီဒေတာအားလုံးနှင့်အတူနောက်ဆုံးမိုဘိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းသည်ဤမိုဘိုင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်ဟုသင်ထင်နေသည်။ ထိုအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ကောင်းမွန်သော resolution ဖြင့်ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်ရှေ့ကင်မရာ
အစပိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သကဲ့သို့ဆိုနီသည်ဤအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူဈေးကွက်တွင်စံပြပုံစံကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အကယ်၍ အတိတ်ကာလအတွင်း MWC ပေါ်မလာခဲ့ပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုရန်တစ်လနှင့်တစ်နှစ်ခွဲနီးပါးစောင့်ရ ဦး မည်။ Sony Xperia XZ2 ပရီမီယံ၊ ၎င်းတွင်နောက်ဘက်အာရုံခံကိရိယာနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ 19-megapixel တစ်ခုနှင့် 12-megapixel monochrome တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ သင်သည်ဗီဒီယိုများကို 4K resolution ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများကိုနှေးကွေးစွာဖမ်းယူနိုင်သည်။ Full HD နှင့် HD နှစ်ခုစလုံးတွင်အသုံးပြုသည်။ နောက်ခံမှုန်ဝါးနေသည့်ဓာတ်ပုံများ - ရှည်လျားသောမျှော်လင့်ထားသည့် bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှု - ကိုအပြည့်အဝသို့မဟုတ်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးအလေးပေးဖော်ပြသည်။
လူကြိုက်များ၏တာဝန်ခံအခန်းထဲကသည် selfies သို့မဟုတ်သင်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်၎င်းတွင် 13 megapixel ရောက်ရှိသည့်အာရုံခံကိရိယာရှိသည်။ ထို့အပြင်သင်မြင်ကွင်းများသည်အလင်းရောင်တွင်မပါ ၀ င်သည့်အခါသင်ရရှိနိုင်သည့် flash ကိုရရှိလိမ့်မည်။
ဒီမော်ဒယ်ရဲ့ကြာရှည်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုနီက ၄ င်းကို IP68 ခုခံလက်မှတ်ကိုအပ်နှင်းဖို့သင့်တော်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သောဖုန်မှုန့်များအားဆားကစ်ထဲသို့ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းနှင့်ရေခုခံနိုင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ စဉ်တွင်, ဒီ Sony Xperia XZ2 Premium နှင့်အတူပါသည့်ဘက်ထရီသည် 3.450 milliamps သို့ရောက်ရှိသည် စွမ်းရည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုံးထက်ကျော်လွန်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သို့ဘာသာပြန်ဆိုသင့်သည်။
နောက်ဆုံးသောပေမယ့်အနည်းဆုံးကတော့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်မိုဘိုင်းဖုန်းများမှာသူတို့ပိုင်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက Android သည်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအမှု၌ Android2Oreo တွင် Sony Xperia XZ8.0 ပရီမီယံလောင်းကစားခြင်း.
ဤမိုဘိုင်းဖုန်းကိုကမ္ဘာအနှံ့စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိရန်အတွက်စီစဉ်ထားသည် လာမည့်နွေရာသီ 2018။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်တဲ့စျေးနှုန်းကိုတော့မထုတ်ဖော်ရသေးပါ။ "ပရီမီယံ" ဟုအမည်မပေးထားသောသူ၏အစ်ကိုသည်ယူရို ၇၉၉ ကျိုးကြောင်းသိသော်လည်းသူ၏စတင်စျေးနှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးနိုင်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက: Sony က
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Sony Xperia XZ2 Premium နှစ်ဆကင်မရာသည်ဂျပန်မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့ရောက်ရှိသည်
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Facebook အချက်အလက်အားလုံးကိုကူးယူပါ